Fannaan CABDI TAHLIIL Warsame oo geeriyooday Iyo Taariikhdiisa | Dhexnimo Media
Home Wararka Fannaan CABDI TAHLIIL Warsame oo geeriyooday Iyo Taariikhdiisa
Fannaan CABDI TAHLIIL Warsame oo geeriyooday Iyo Taariikhdiisa
Allaha u naxariistee fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Warsame ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho, kadib muddo uu ku xanuunsanaa magaalada, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya
Geerida Cabdi Tahliil Warsame ayaa waxaa qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka ku xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda warfaafinat Soomaaliya Ismaaciil Oronjo.
“Inaa Lilaahi wa inaa Ileyhi raajicuun, waxaa hadda la ii xaqiijiyay in uu magaalada Muqdisho ku geeriyooday Fanaanka caanka ah Cabdi Tahliil Warsame oo muddooyinkii ugu dambeyn ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho,” ayuu yiri afhayeenka.
Xaaladda caafimaad ee fannaa Cabdi Tahliil ayaa sii xumaanaysay waayadan danbe, mana jirin daryeel dhammeystiran oo uu ka helay dowladda Soomaaliya.
Cabdi Tahliil Warsame wuxuu safka hore kaga jiray fannaaniinta qiimaha mugga weyn ku dhex leh fanka Soomaalida, heesihii uu ku luuqeeyey waxay kaalimaha ugu sarreeya kaga jiraan dhageysiga keydka suugaanta ee ay isticmaalaan bulshada Soomaalidu.
Cabdi Tahliil Warsame, sida la hubo wuxuu ku dhashay deegaanka Wardheer sannadkii 1952-kii.
Sannadkii 1968-kii fannaanku wuxuu ku luuqeeyey heestiisii labaad ee Onkod, taasoo aad u caan baxday. Heestan oo ilaa maanta kaalmaha hore uga jirta dookha dadweynaha waxaa u dhiibay Abwaan Axmed Saleebaan Bide.
Sannadkii 1971-kii wuxuu ka qeyb galay tartankii heesaha hirgalay waxaana ku weheliyay fannaaniin ay ka mid ahaayeen, Cabdulaahi Cumar Xarago, Cabdi Xasan Dige, Cumar Nuur Cabdule iyo Xasan Aadan Samatar.
Fannaaniintan dhamaantood waxay ku biireen xidigihii kooxdii Hobalada Waabari.
Kooxihii kale ee uu Tahliil la soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa Kooxdii Danan oo uu kamid noqday hogaankii sare ee kooxdaas.
Previous articleCudurka corona: Cilmi-baaristii ugu saameynta badnayd ee hydroxychloroquine oo dib loola noqday
Next articleKa Joog Jabuutay Waa Lagu Jabaye (WQ: Cali Cabdi Coomay)